IiFaucethi zeNdawo yeKhitshi-Ukukhetha Eyona Ilungileyo-IiFaucethi zeKhitshi eziBalaseleyo ngo-2021 | IiFaucethi zeBathroom ezigqibeleleyo | WOWOW iiFaucets
Ikhaya / Blog / Indawo yokuphekela Indawo yokupompa-Ukukhetha elungileyo
2021 / 09 / 24 uhleloBlog 3179 0
Kweli xesha langoku, iipompo zasekhitshini akufuneki zibeyindawo ebalulekileyo ye-ole ekhitshini lomntu. Ngobungakanani obuninzi, iimilo, ukugqitywa, kunye noyilo kwintengiso, isinki yinto ebalulekileyo ekusetyenzisweni nasekulungiseni iinwele ekhitshini lakho. Nokuba ikhitshi lakho liza noyilo lwe-rustic ye-Ultra-yala maxesha okanye yeklasikhi, ngokuqinisekileyo kukho itepu eya kulungela imeko-bume onqwenela ukuyenza apho ulungiselela ukutya kwakho kwaye uchithe ixesha elifanelekileyo kunye namalungu osapho.
Kulungile, okokuqala, kufuneka ukhethe itompu ehambelana ngokwenene nekhonkco lesinki sakho. Emva koko, kuya kufuneka ukhangele ukuze ubone inani leemingxuma ezikhulayo kwi-countertop yakho, okanye ukutshabalalisa apho. Qiniseka ukuba ukhetha itompu eya kuba lula ngenene ukukhupha unxibelelwano kumsele, kwaye ukhethe ubungakanani obulungileyo belungu losapho kwisinki sakho.
Uya kufumana iintlobo ezininzi zezinto ezisetafini kwintengiso. Nokuba ukhetha ukukhetha isixhobo okanye isicwebezelisi, ubhedu, intsimbi engenasici, okanye intsimbi engenasici, kuya kufuneka uqiniseke ukuba umzimba wetephu kufuneka uhlale ixesha elide kwiipompo eziphezulu zekhitshi, kulula ukuzigcina, zinzima, akufuneki zonakaliswe okanye ibenombala ngokulula, kwaye kufuneka ulingane kakuhle nomxholo wakho wasekhitshini.
Kuya kufuneka uyazi ukuba itepu yasekhitshini eyenziwe ngezixhobo iyaziwa ukuba iyamelana kakhulu neziphumo ezibi kwaye iipompo ezenziwe ngentsimbi engenamatshini ziyaziwa ukuba ziyafikeleleka. Kubaluleke kakhulu ukuba unyanzelise ekuthengeni ubuso obomeleleyo- itompu oyikhethileyo kufuneka ihlale ixesha elide ngaphandle kokuvuza kwaye awuyithandi nje xa ubona isandi esivuzayo? Yenza nje iinzame zokukhetha itompu esemgangathweni kwaye ingena kuhlahlo-lwabiwo mali.
Kuya kufuneka uyazi ukuba ispout kunye nesiphatho nako kugqiba isitayile sompompo- kukwakhona izibambo ezizodwa nezimbini. Izinki ezinonyango olunye zilunge kakhulu ukuba ufuna ukulawula ubushushu kunye nenqanaba lamanzi akho okusela. Umbhobho olawulwa kabini ukuvumela ukuba uhambise kwaye ulawule ubushushu bamanzi ngokuchanekileyo kuba unolawulo olwahlukileyo, elinye ngamanzi ashushu elinye ngamanzi abandayo. Kucatshangelwa ukuba umbhobho ombhobho ophindwe kabini ulunge ngakumbi kunombhobho omnye wethumbu ekhitshini. Zintathu iintlobo zestout spout onokuzithenga.
Mane ulungelelanise into oqhele ukuyisebenzisa xa usebenzisa itepu kwaye uye phambili uyithenge ngokweemfuno zakho. Unokuthenga ipompo edongeni engadingi mngxunya wepatio ongaphandle.
Ukuba awululo uhlobo lomntu ofuna ukuyokuthenga ezivenkileni, yiya nje kwi-Intanethi kwaye uyakufumana itoni yeevenkile zehardware ezikwi-Intanethi ezibonelela ngeentengiso ezintle kwiipompo.
Isiseko seZipompo zeKhitshi
Isuka kuJustin Sivan
Ikhitshi ngalinye lifuna itompu. Xa kuziwa ekukhetheni ezi zinto zingundoqo, isitayile sesibini. Sonke sifuna ukukhetha itompu enokusinda kwiimeko ezinzima kakhulu, kubandakanya amawaka emijikelezo yokuvula / ukucima unyaka kunye nokwakhiwa kwamaminerali anzima, kwaye isanikezela ngenkonzo engenasiphako unyaka nonyaka.
Eli nqaku libonelela ngeempendulo zeyona mibuzo ibuzwa rhoqo malunga nokukhethwa kwetephu. Ngokulandela le ngcebiso inikwe apha, awuyi kwazi kuphela indlela yokukhetha itompu efanelekileyo, kodwa nendlela yokufumana okuninzi kuyo. Kwaye, ekukhetheni uhlobo ukuya ekugqibeleni, zininzi izinto ekufuneka uziqwalasele xa ukhetha itephu yakho elandelayo yekhitshi.
Zazi iivelufa zakho.
Ivalve yinxalenye yombhobho olawula ukuhamba kwamanzi. Zine iindidi onokukhetha kuzo: iivalvu zebhola, iivelufa zempahla, iivaluva zokucinezela, kunye neediski zeceramic. Makhe sijonge kuhlobo ngalunye kwaye sifumane umbono ngokubanzi wokuba basebenza njani. Uhlobo ngalunye lwetheyiphu lunevalvu yangaphakathi elawula ukuhamba kwamanzi kwisiporho. Umgangatho wevalvu, kunye okanye ngaphandle kwegasket, umisela ukuthembeka kunye nokuqina kompompo.
Yodongwe disc vana.
I-ceramic disc valve, ichongwa liqhosha layo elinye kumzimba obanzi we-cylindrical, luphuhliso lwamva nje kubuchwephesha betekhnoloji yetephu. Olu hlobo luqukethe ii-discs ezimbini zeceramic: enye idiski imile, ngelixa elinye liza kuhamba ngokuchasene nokucheba, ukuthintela amanzi okanye ukuvumela ukuba kudlule. Kuba iidiski ziphantse zathi tyaba, itywina alinamanzi. Nangona ibiza kakhulu, le yeyona ivelufa inokuthenjwa kwaye ayithambekele ekonakaleni kunezinye iintlobo.
Ibhola yethumbu levalufa.
Kuqheleke kakhulu kwiisinki zekhitshi, iifompu zebhola ziluhlobo lokuqala lwetompu engenanto. Isinyithi esijikelezayo okanye ibhola yeplastiki isetyenziselwa ukulawula ukuhamba kwamanzi, kwaye zinokuchongwa ngesiphatho esinye esihamba ngaphezulu kwesigqubuthelo esimile okwebhola ngaphezulu kwesiseko sompompo. Iibhola zeplastiki ekugqibeleni ziyaguga, kodwa iibhola zentsimbi ziyilelwe ukuba zihlale ixesha elide.
Itephu yevalufa yeCartridge.
Iipompo zeCartridge zinezinyithi ezingenanto okanye iplastikhi yeplastikhi etywinela ispout okanye ithumbu lomzimba. Kuxhomekeke kwindlela uthotho lwemingxunya kwiCartridge ehambelana ngayo nesiqu, amanzi axubekile kwaye alawulwa. Ezi mpompo zithembeke kakhulu, ngakumbi ukuba zixhotyiswe ngeCartridge yobhedu.
Ukunyanzeliswa kufana nefomthi yakho ye-washer eyisiseko kuba isebenza ngokuvula nokuvala ukuhamba kwamanzi ngokunyuka nokuwa kwesiqu, okufuna ukuba uqinise (ucofe) iwasha ukuvala ukuhamba kwamanzi. Ezi zezona zingabizi kakhulu, kodwa zithande ukuvuza.
Izinto zemibhobho yamanzi
Nawuphina umbandela onokubamba amanzi unokusetyenziselwa ukwenza itompu. Ngokwesiqhelo, iipompo zenziwe ngentsimbi eyonakalisayo esezantsi: ubhedu, ubhedu, ubhedu, intsimbi engenasici kunye neal zinc alloys.
I-alloy-cast cast alloy
Iipompo ezinomzimba we-zinc cast alloy zibiza kakhulu. Nangona kunjalo, ayomelele njengobhedu kwaye ayiphili kubume obunobungozi beempompo ezinje ngobhedu okanye ngentsimbi engenasici. Akukhuthazwa xa ucinga ngokuthengwa kwetephu.
I-Brass lolona khetho lukhuthazwayo ngenxa yokuba lukhuni kunye nokukwazi ukujongana namaqondo obushushu aphezulu. Nangona kunjalo, iipompo zobhedu, ezenziwe ngobhedu, i-zinc kunye nelothe, zinokufumana umkhondo wobungakanani belothe emanzini okusela, okubeka umngcipheko empilweni. Ukunciphisa lo mngcipheko, umThetho waManzi okusela aKhuselekileyo ufuna ukuba abavelisi betephu bangasebenzisi ngaphezulu kweepesenti ezisibhozo zokukhokela kwiipompo zobhedu. Abavelisi baphanda iitekhnoloji zokuqhubeka nokunciphisa inani lelothe kubhedu.
Isinyithi ayiqulathanga lead, eluncedo olukhulu kwimeko yolawulo yanamhlanje. Endaweni yoko, intsimbi engenasici yintsimbi yentsimbi equlathe ubuncinci i-10.5% ye-chromium. Nangona kunjalo, insimbi engenasici esetyenziselwa iifompo zihlala zingama-304 insimbi engenasici, eyaziwa ngokuba yi-18/8 insimbi engenasici ngenxa yokwakheka kwayo kwe-18% ye-chromium kunye ne-8% ye-nickel. I-Nickel inika isinyithi isakhiwo sayo esikhethekileyo sekristaline, esonyusa amandla kunye nokuqina kwayo.
Ukuba uthanda ikhitshi lakho ukuba libukeke ngokufanayo, lungelelanisa umbala kunye nokugqitywa kwetampu yakho kunye nezinye izinto kunye nezinye izixhobo. I-bronze, i-chrome kunye ne-nickel / insimbi engenasici iyafumaneka kuwo onke amaxabiso. Iinketho eziphambili zibandakanya.
Chrome - Yomelele, ayibizi mali ininzi, kwaye kulula ukuyigcina. I-chrome ekhazimlisiweyo inikezela ngombala ocwebezelayo, ocwebezelayo ofanele iikhitshi zale mihla. Unokufumana kwakhona i-chrome egqibeleleyo ethambileyo, enje nge matte okanye ibrashi, enokuhamba kunye nezitayile zasekhitshini.
Umzimveliso - Iyakwazi ukuma kwimikrwelo kunye nomonakalo wamanzi. Ikwabonelela ngokujongwa kweetoni, ukubukeka okuthambileyo. Ihlala ixabisa ukugqitywa kune-chrome kwaye isebenza kakuhle kwiikhitshi zesitayile sotshintsho.
Titanium - Umncinci omncinci, onika istage ebushelelezi kunye neendlela eziphambili zetitanium.
Umdongwe - I-Porcelain inokongeza umnxeba weklasi.
Ngaphambili :: Izixhobo zeBlue Faucet kunye nezixhobo next: Yenza ikhitshi lakho licoceke ngeeMpompo zeKhitshi
2021 / 09 / 24 1701